कोरोना त्रासदी,मानसिक रोग र सरकारी योजना: इन्दिरा अधिकारी – newskiran.com
Posted By : newskiran.com Posted On : 2020-09-02 1:46 pm
१७ भदौ २०७७ काठमाडौं ।✍️Corona virous (Covid -19) यो नयाँ प्रजातिको virous हो ! यसले सामान्य रुघाखोकी देखि गम्भीर स्वासप्रस्वास सम्म गराउन सक्छ ! यो virous नाक र मुखको माद्यम बाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्दछ ! संक्रमित व्यक्तिको संसर्गमा आउने मानिसहरूमा उक्त भाइरस सर्न सक्छ ! संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छियुँ गर्दा नाक र मुखबाट निस्किएका ससाना छिटाहरुमा virous हुन्छ ! संक्रमितहरुको नजीक बस्ने मानिसहरूमा यो भाइरस सर्न सक्छ ! भाइरसले पहिला घाटी , स्वासनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गर्दछ ! बिस्तारै ती अंगहरुलाई कोरोना भाइरसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो संख्या वृद्धि गरेर गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ ! जुन मानव जातिमा पहिलो पटक december 2019 मा चिनको वुहान प्रान्तमा पहिचान भएको थियो ! यो भाइरस पशु बाट मानिसमा प्रसार भै हाल मानिस बाट मानिसमा संक्रमण फैलिदै गएको विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ले दाबी गरेको छ !
✍️ चिनको वुहान बाट सुरु भएको कोरोना भाइरस आज विश्व भरि नै फैलिएको छ ! अहिले विश्वभरी कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोगको त्रास छरिएको छ ! त्यसकारण अधिकांश देशका मानिसहरूको गतिविधिहरु अत्यावश्यक काममा मात्र सिमित भएका छन् ! उक्त भाइरस फैलिन नपावोस भनेर सरकारले अवलम्बन गरेको उपाय स्वरुप अधिकांश मानिसहरू लामो समयदेखि घर भित्र थुनिएका छन ! (covid -19) corona virous जस्तो औसधि उपचार पत्ता नलागेको रोग लाग्नै नदिनु र महामारी फैलिनबाट रोक्नु सरकारको दायित्व हो ! तर लकडाउन लागु गरेपछि श्रमिक, मजदुर र निर्धन नेपालीहरुको चुल्हो कसरी बल्छ र के पाक्छ भन्ने बिषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक थियो ! यो बन्दाबन्दिको अवस्थामा रोगले भन्दा नि भोकको छट्पटीले मानिसहरूको मृत्यु भैरहेको छ ! चैत्र ११ बाट सुरुभएको लकडाउनका कारण कयौं मानिसहरू खान लाउन र बस्न नपाएकै कारण मृत्यु वर्ण गर्न बाध्य भएका छन ! यसको कुनै लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन ! दिनहुुँ कोरोनाको त्रास जनमानसमा आतंक बनेर फैलिरहेको छ !त्यसको विकल्पमा सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएको पाइदैन ! उल्टो आफै लुटपाटको मार्गतिर धकेलिएको देखिन्छ !
✍️ नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको यो अत्यन्त विषम र द्रुतगतिमा बिग्रदो परिस्थिति बीच पनि गर्नै पर्ने कामहरु पनि गरेको छैन ! खासगरी महामारी नियन्त्रण , जनताको जीवन रक्षा , अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चेष्टा र बिदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना देशका नागरिकहरूको उद्दार जस्ता न्युनतम प्रयास पनि गरेको पाइदैन ! महामारी नियन्त्रण गर्न मात्र हैन अन्य थुप्रै जेम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने कार्यहरूबाट सरकार चुकिरहेको छ ! किसानहरू बाली लगाउने समय बितिसक्दा पनि रासायनिक मल नपाएर बिभागिय मन्त्री विरुद्ध नारा लगाउदै सडकमा आएका छन !मजदुरहरु न कामका न घरका भएकाछन ! उनिहरुको गास , बास र कपासको कहालिलाग्दो बेठेगानका कारण निराश मात्र हैन छोराछोरीको भोकको छट्पटी सहन नसकेर पल पल मरिरहेका छन ! अर्कोतिर महिला हिंसा , बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपरधहरु वंश वृक्ष झैं मौलाइरहेको छ ! हाम्रो देशमा राष्ट्र प्रमुख महिला , प्रधानन्याधीश , सभामुख र केही क्रान्तिकारी महिला नेतृत्व राज्यसत्तामा रहदा पनि यस्ता अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणको पहल सम्म नगरेको अवस्था छ! अहिले शिक्षाक्षेत्र अन्योलग्रस्त रुपमा अगाडि बडिरहेको अवस्थामा साठी लाख विध्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त नै छ ! अर्कोतर्फ बाढीपहिरोबाट नेपालका विभिन्न स्थानमा जनधन नष्ट भएकाछन ! यस्ता जोखिमपूर्ण स्थान अन्यत्र सारिनुपर्ने त्यतातिर सरकारको ध्यान नै जादैन ! यस्ता भाइरसै भाइरसको महामारीमा कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न , जिज्ञाशा आम नागरिकको मनमा छ ! तर सरकार मात्र लकडाउन लकडाउन भनिरहेको छ !
✍️कोभिड संक्रमण मानिसहरूमा यतिबेला त्रास ,भोक र विभेदको चपेटामा विकाराल बन्दै गइरहेको छ ! यस्तो महामारीमा पनि सरकारको कुनै बलियो भरपर्दो योजना कहिँ कतै देखिदैन !जताततै विभेद , बेथिति र प्राकृतिक प्रकोप मात्र देखिन्छ ! लामो समयदेखि जनतालाई बन्दाबन्दिमा राखे ता पनि सरकारले कोरोना विरुद्ध केही तयारी गरेको देखिदैन ! भाइरस संक्रमितलाई आफै उपचार गर भन्ने गैर जिम्मेवारपुर्ण अभिव्यक्ति दिनु , स्वाब परिक्षणको नतिजा कुर्दाकुर्दै बिरामीको मृत्यु हुनु , उपचार गराउने अस्पताल प्रयाप्त नहुनु ,भएका आइसोलेसनहरु सुंगुरको खोर जस्तै हुनु , संक्रमितहरुप्रती अमानवीय व्यबहार ,चरम लापरवाहीका कारण आसोलेसनमा बसेकाका मानिसहरुको मृत्यु भैरहेको छ ! के यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हैन ? निषेधाज्ञामा मात्र जोड दिँदा रोगबाट भन्दा पनि भोक र मानसिक रोगले मानव बिनाश हुने निश्चित देखिन्छ ! यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र त्यहाँ भित्र आबद्ध अधिकांश नेताहरु विभिन्न राजनीतिक दाउपेच र आफ्नो ढोङ प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नोट:-(इन्दिरा अधिकारी करीब २५ वर्ष देखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिरहेकी र आफ्नै मेडिकल पनि चलाइरहेकी छिन् ।साथै उनी वैद्य निकट स्वास्थ्य कर्मी संघकी केन्द्रीय संयोजक समेत रहेकी छिन् ।)
2019-01-24 newskiran.com 0